Izindiza ze-New Rome, Nice ne-Alicante ku-Icelandair manje
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza ze-New Rome, Nice ne-Alicante ku-Icelandair manje
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • France Izindaba Ezintsha • Izindaba ze-Iceland Breaking • Izindaba Zase-Italy • Izindaba • Abantu • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Le mizila emisha yase-Icelandair ihlinzeka ngoxhumano phakathi kweNyakatho Melika ne-Iceland ezindaweni ezintathu ezidumile zezivakashi phakathi nesikhathi sokuhamba esimatasa kakhulu sonyaka.
Icelandair namuhla imemezela ukungezwa kwezindawo ezintathu ezintsha kunethiwekhi yayo yamazwe ngamazwe ezokuvakasha kuleli hlobo: Rome, Alicante and Nice.
Le mizila emisha ihlinzeka ngoxhumano phakathi kweNyakatho Melika ne-Iceland ezindaweni ezintathu zezivakashi ezidumile phakathi nesikhathi sokuhamba esimatasa kakhulu sonyaka. Abagibeli bazokwazi futhi ukusizakala ngokuma kwezinsuku eziningi e-Iceland, besendleleni, ngaphandle kwemali eyengeziwe yendiza.
I-World Heritage city Rome, e-Italy, izohlinzekwa kabili ngeviki phakathi kwe-Reykjavik (KEF) ne-Rome Fiumicino Airport (FCO) ngoLwesithathu namaSonto kusukela ngo-July 6, 2022, kuze kube ngu-September 4, 2022, ngokuxhumeka kosuku olufanayo ukuya nokubuya eNyakatho Melika.
Indiza yase-Nice izonikeza ukufinyelela endaweni ejabulisayo yaseNingizimu ye-France, esebenza phakathi kwe-Reykjavik (KEF) ne-Nice Airport (NCE) kusukela ngoJulayi 6, 2022, kuze kube ngu-Agasti 27, 2022, ngoLwesithathu nangeMigqibelo.
Izindiza eziya e-Alicante, eSpain (ALC) zizoqala ngoFebhuwari 10, 2022, ngezindiza ezisebenza kuze kube kabili ngeviki ehlobo nasekwindla.
Ngaphezu kwalokho, Icelandair ibuyisele izindiza ezisuka eMontreal naseVancouver, yanikeza abantu baseCanada izinketho ezivuselelwe e-Iceland naseYurophu.
Lezi zindawo ezintsha zizonweba futhi inethiwekhi yomzila ekhulayo ye-Icelandair, okuhloswe ngayo ukunikeza amakhasimende izinketho zokuhamba ezingcono kakhulu nokuxhumeka e-Iceland nangale kwayo.
U-Bogi Nils Bogason, uMongameli kanye ne-CEO ye-Icelandair uthe: “Njengoba singena onyakeni omusha, sibona izimpawu zokusimama kwemboni yezokuvakasha. Siyajabula ukukwazi ukungeza lezi zindawo ezintathu ezintsha kuhleloxhumano lwethu lwemizila eseluvele lubanzi, okuqhubekela phambili kusiza ukukhula kuzo zombili izimakethe eziphumayo nezingenayo. Ngokungezwa kweRome, i-Nice ne-Alicante ehlobo, i-Icelandair izibophezele ekunikezeni amakhasimende ethu aseYurophu naseNyakatho ye-Atlantic ukukhetha okwengeziwe nokuxhumana okulula.